မိုက်ခရိုဝေဖ့် ဆက်သွယ်ရေး. မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ဆက်သွယ်ရေး သည် လှိ
ⓘ မိုက်ခရိုဝေဖ့် ဆက်သွယ်ရေး. မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ဆက်သွယ်ရေး သည် လှိုင်းအလျား ၃၀ စင်တီမီတာမှ ၁ စင်တီမီတာ အကြားရှိ ရေဒီယိုလှိုင်းကို အသုံးပြုကာ အချက်အလက်များကို လွှင့်ထု ..
ⓘ မိုက်ခရိုဝေဖ့် ဆက်သွယ်ရေး
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ဆက်သွယ်ရေး သည် လှိုင်းအလျား ၃၀ စင်တီမီတာမှ ၁ စင်တီမီတာ အကြားရှိ ရေဒီယိုလှိုင်းကို အသုံးပြုကာ အချက်အလက်များကို လွှင့်ထုတ် ဆက်သွယ်သည့် နည်းပညာတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ယင်းလှိုင်းနှုန်းမှာ 1.0 GHz မှ 30 GHz အကြားတွင် ရှိသည်။
မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ဆက်သွယ်ရေးကို ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်အပေါ်ရှိ ဆက်သွယ်ရေးများ၊ ဂြိုဟ်တု ဆက်သွယ်ရေးများနှင့် ပင်လယ်နက်အတွင်း ဆက်သွယ်ရေးများတွင် အသုံးများသည်။ အခြားအပိုင်းရှိ ရေဒီယိုလှိုင်းခွင်များကိုမူ ရေဒါစနစ်၊ ရေဒီယို လမ်းပြစနစ်၊ အာရုံခံစနစ်နှင့် အာကာသ လေ့လာရေးများတွင် အသုံးပြုကြသည်။
Wikipedia: မိုက်ခရိုဝေဖ့် ဆက်သွယ်ရေး